अब कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति पाइने
राजु बास्कोटा शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 13092 पटक पढिएको
काठमाडौं : मोबाइलमा कुरा गरिरहनु भएको छ ? तपाइँले गरिरहनुभएको कुरा नसकिँदै बिचमै फोन काटियो ? अब चिन्ता नगर्नुस्। मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिएमा सो कलको क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ सार्वजनिक गर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा उक्त कुरा गरेको समया बराबरको शुल्क क्षतिपूर्ति स्वरूप ग्राहकलाई दिनुपर्छ। यो शुल्क मोबाइल फोनमा कुराकानी हुने पल्स अवधिअनुसार फोनकल दर बराबरको रकम ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ।
यो क्षतिपूर्ति पल्स अवधि पूरा हुन नपाएको अवधिको मात्रै हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताउनुभयो। आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने यो व्यवस्थामा कुनै ग्राहकले एक मिनेट ६÷७ सेकन्ड कुराकारी गर्दै गर्दा काटियो भने ६÷७ सेकेन्डको भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कलमा पल्स अवधि पूरा नगरेको अवधिको पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले मोबाइलमा १० सेकेन्डको एक पल बनाएको छ। आगामी कात्तिकदेखि हरेक सेकेन्डकै एक पल्स मानिने र सेकेन्डअनुसार पैसा लाग्नेछ। क्षतिपूर्तिवापत सेवा प्रदायकले सेवा लिएको नम्बरमा नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसरी क्षतिपूर्ति बराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस वा नोटिफिकेसनमार्फत अनिवार्य रूपले जानकारी गराउनुपर्छ।
अर्यालका अनुसार मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको गुणस्तर मापनका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो। दुई पटकसम्म सुधारको मौका दिइनेछ। तेस्रो पटक पनि सेवाप्रदायकले अटेर गरेमा नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ बमोजिम सर्त पालना नगरे कसुर अनुसार पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ। यो जरिवानापछि पनि सेवामा सुधार नगरे प्राधिकरणले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ। प्राधीकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन पनि सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तयार पारेको उल्लेख छ।
न्यूनतम गुणस्तर सीमा
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम गुणस्तरको सीमा पालन गर्नुपर्नेछ। आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तारसहित तथा ताररहित), टेलिफोनका लागि नेटवर्क नचलेको वा सेवा प्रदान गर्न नसकेको समयावधि एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीको नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणालीबाट एक महिनाको अवधिमा नचलेका सम्पूर्ण साइटको औसत समयको मापन गर्नेछ।
फोन डायल गरेपछि पाँच सेकेन्डभित्र फोनको घन्टी बजिसक्नुपर्नेछ। आफैं फोनकल वा सम्पर्क विच्छेद हुने दर (कल ड्रप) दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यसको मापन पनि एक महिनाभरि भएको सफल कलको दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। फोनको आवाज स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
एउटै सेवाप्रदायकभित्र हुने कल तथा अन्तरिक सञ्जाल सम्पर्क तथा अन्तर सञ्जाल सम्पर्क असफल हुने दर एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ। मोबाइल सेवाको नेटवर्क पहुँच ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने, मोबाइल सेवाको कभरेज हुँदाहुँदै फोन नलाग्ने समस्या दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ।
इन्टरनेट सेवा सुधार
एक महिनाको अवधिमा डाटा सेवा क्रियाशील बनाउन चाहने ९५ प्रतिशत ग्राहकको चार घन्टाभित्र सफलतापूर्वक सेवा पाउनुपर्छ। डाटा प्राप्तिको सफलता ८० प्रतिशत हुनुपर्नेछ। डाटा अपलोडको दर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ।
डाटालाई लक्षित स्थानसम्म पुग्न लाग्ने समय २५० मिलिसेकेन्ड वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ। बिलिङ तथा ग्राहकको गुनासोसम्बन्धी व्यवस्थामा बिलिङ विवाद दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, बिलिङ विवाद ३० दिनभित्र समाधान हुनुपर्नेछ।
फेरि २२ सीडीओसहित ३१ जनाको सरुवा 13548
मागेरै देश चल्दैन 821
सडक दुर्घटनामा पूर्व प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठको मृत्यु 2613
मोटरसाइकलले ठक्करबाट एक यात्रुको निधन 5081
सशस्त्र प्रहरी जवानको हत्या 11955